Falanqeyta Kulanka Real Valladolid Vs Real Madrid Ee Horyaalka La Liga Spain
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeyta Kulanka Real Valladolid Vs Real Madrid ee Horyaalka La Liga Spain
February 20, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Real Madrid ayaa u safreysa Valladolid iyadoo wiilasha Zinedine Zidane ay doonayaan inay soo yareeyaan farqiga u dhexeeya Atletico Madrid oo hogaanka u heysa La Liga.
Garoonka Estadio Jose Zorrilla
Valladolid ayaa seegi doona ciyaartoy badan kulankan. Kooxda waxaa dhaawac uga maqnaan doona Javi Sanchez, Jawad El Yamiq, Kiko, Marcos de Sousa, Oscar Plano, Pablo Hervias iyo Raul Carnero oo dhaawacyo qaba. Lucas Olaza ayaa sidoo kale laga ganaaxay ciyaarta.
Sikastaba, kooxda ayaa dib u soo dhaweyn doonaa Joaquin Fernandez, Fede iyo Ruben Alcaraz oo ganaax ku maqnaan doona.
Zinedine Zidane ayaa dhankiisa waxaa ka maqnaan doona xidigo muhiim ah sida Sergio Ramos, Marcelo, Alvaro Odriozola, Eden Hazard, Rodrygo, Federico Valverde iyo Eder Militao kuwaasi oo dhamaantood dhaawac ku seegay kulankaan.
Dani Carvajal ayaa shaki ku jiraa inuu ciyaari doono kulankan ka dib dhaawicii muruqa kulankii Valencia.
kulamadii ugu dambeeyay ee labada koox Real ayaa gaartay guul muhiim ah . Los Blancos ayaan laga badinin sagaalkii kulan ee ugu danbeysay ee ay ka horyimaadaan Valladolid.
Madrid ayaa badisay afar ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeysay ee ay la ciyaareen Albivioletas , halka kulanka kale ay barbaro galeen. Wiilasha Zidane ayaa ku soo baxay guul 1-0 ah kulankii ugu danbeeyay horaantii xilli ciyaareedkaan.